रविको प्रश्न: चितवन घट’नामा म वि’रुद्धको उजुरी काठमाण्डौमा लिन मिल्ने , सर्वेन्द्र खनालहरुको लिन किन नमिल्ने?…सेयर गरौ।
मु’द्दा दर्ता गर्न शाखाका प्रहरी अधिकारीले आ,नाकानी गरेपछि प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी श्याम ज्ञवालीसँग नेताहरुले छलफल गरेका थिए।
उनलेसमेत मु,द्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको बाबुरामका सहयोगी विश्वदीप पाण्डेले जानकारी दिए । ‘प्रहरीले जाहे’री लिन मानेन । अब कि,टानी जाहेरी नेपाली जनताकोमा दिने हो’, उनले भने, ‘बाँकी फैसला अब जन अ,दालतले गर्छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईसहितका नेता आइतबार दिउँसो सत्ता’रुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठसँगै पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनाल वि,रुद्ध अपह’रण तथा शरीर बन्ध’कको मु,द्दा दर्ता गर्न पुगेका थिए ।
मु,द्दा दर्ता गर्न अपह’रित भएका भनिएका सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवसमेत टेकु पुगेका थिए । वैशाख १० गते महोत्तरी पुगेर सांसदद्वय बस्नेत, श्रेष्ठ र पूर्वआईजीपी खनालले तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउने प्रयास गरेको आ’रोप लागेको छ।
सोही प्रयासस्वरुप उनीहरुले सांसद यादवलाई अ,पहरण गरेर काठमाडौं ल्याएका थिए। समाजवादी पार्टीका नेताले प्रधानमन्त्रीकै नि,र्देशनमा सांसद यादवको अपह’रण गरेको दाबी गरेका छन्।
महोत्तरीबाट अ,पहरणको शैलीमा काठमाडौंको नक्सालस्थित मेरियट होटलमा राखेपछि सांसद यादव डा. भट्टराई र नेता उपेन्द्र यादवको सम्पर्कमा पुगेका थिए। अन्नपुर्ण पोष्टमा खबर छ ।
चितवनमा भएको घ,टनामा सर्वेन्द्र खनाल कै निर्देशनमा मेरो र युवराजका वि रुद्ध काठमाडौमा उ,जुरी लिन मिल्ने,उहाँहरुको विरु नमिल्ने? उ,जुरी लिएर महोत्तरी पठाउन सकिन्छ तर उ,जुरी नै नलिन कसरी मिल्ला?कानुन सानालाई मात्रै?अराजकताको खाल्डो यति ठुलो नखान्नुस,पुरिने तापाईहरु आफै हो।